Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – कुराकानी – प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासँग
कुराकानी – प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासँग
Feb 23, 2016 DT Admin Interviews, Top News Comments Off on कुराकानी – प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासँग
‘१९५० को सन्धिले पहिचानमा समस्या’
– देवेन्द्र भट्टराई, नयाँदिल्ली
फाल्गुन ११, २०७२- नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम पहिल्याउन, सन्धि–सम्झौतामा समीक्षा गर्न र नयाँ समझदारीका उपाय पहिल्याउन भारत सरकारले हालै गठन गरेको प्रबुद्ध समूहमा नेपाल मामिला जानकार प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासमेत छन् । नेपालले गठन गरेजस्तै भारतीय प्रबुद्ध समूहको ‘कार्यक्षेत्र‘ निर्धारण भइनसके पनि प्राध्यापक लामा आफूले गर्न सक्ने र सुझाउने विषयक्षेत्रबारे स्पष्ट छन् । सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पूर्वसंस्थापक कुलपति तथा इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति रहिसकेका लामा हाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाली अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापनरत छन् । समूहका अन्य सदस्यमा प्राध्यापक बीसी उप्रेती, राजनीतिज्ञ भगतसिंह कोसियारी र कूटनीतिज्ञ जयन्तप्रसाद समेत छन् । विगतमा सार्क संगठनमा गठन भएको प्रबुद्ध समूहमा समेत सदस्य रहिसकेका लामाले जेएनयूको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र परिसरमा देवेन्द्र भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :
प्रबुद्ध समूहको जिम्मेवारी के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
भारत–नेपाल सम्बन्धको इतिहास र आयाम कस्तो रह्यो, के–के अडान तथा समस्या छन् भन्ने बुझ्ने काम हुनेछ । यो खाली १९५० को मैत्री सन्धिको मात्रै कुरा होइन, त्यसपछि व्यापार, सुरक्षा वा सीमावर्ती सरोकारका समझदारीसम्म पनि अध्ययन हुने स्थिति आएको छ । अहिलेसम्म कस्तो राजनीतिक सोच तथा प्रशासनिक दृष्टिले काम गरेको छ वा बिगारेको छ भन्ने समीक्षा हुनेछ ।
यो २१ औं शताब्दीको भिन्न आयाममा नेपाल–भारत सम्बन्धको ढाँचा उस्तै परम्परागत रहिरहने वा समयसम्मत बन्ने प्रश्नमा हाम्रा राय/परामर्श केन्द्रित हुनेछन् । सबै कुरालाई लिएर सम्बन्धको ठोस अर्थमा सकारात्मक रूपान्तरणको उपाय हामी सुझाउनेछौं । नेपाल–भारत सम्बन्धको कडी १९५० कै सन्धिमा लुकेको छ भन्नेहरू थुप्रै छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा धेरैले असमान सन्धि भन्ने गरेका छन् ।
तपाईंंलाई के लाग्छ ?
यो हामीले अर्को चरणमा प्रबुद्ध समूहले छलफल गरेर मात्रै खाका बनाउन सकिने कुरा हो । म १९५० को सन्धिकै कारण हामी भारतीय गोर्खामा आइपरेको कठिनाइ र पहिचानको समस्याका विषयलाई समेत प्रबुद्ध समूह छलफलमा उठाउनेछु । सन्धिको धारा ६, ७, ८ मा नेपालका तथा भारतका नागरिकहरू एकअर्को देशमा बिनाकागजात आवतजावत गर्न सक्नेछन् भनिएको छ ।
अब हामी भारतमा रहेका गोर्खाहरूलाई नेपालतिरबाट आएका नेपालीका कारण आफ्नै पहिचानमा मुस्किल खेप्नु परिरहेको छ । हाम्रै भाषा, संस्कृति, अनुहार सबै मिल्दो भएपछि हामी सबै भारतीय गोर्खा पनि उता (नेपाल) बाटै आएका हौं भन्ने सोचाइ भारतमा बढ्दो देखिन्छ ।
यिनीहरू (भारतीय गोर्खा) समेत पैसा कमाउन आउँछन्, फर्केर जान्छन् भन्ने सोचाइ यहाँ छ । हामीलाई आफ्नै देश (नेपाल) को माया छ भन्ने भ्रम यहाँ छ । यो कुराले गर्दा भारतमा रहेका झन्डै १ करोड गोर्खाहरूलाई खुबै ठूलो आघात परेको छ ।
१९५० सन्धिका कारण भारतीय गोर्खा आफैं पनि मारमा छन् ?
हो, पहिचानको स्पष्ट समस्या देखिएको छ । भारतीय गोर्खा र नेपालका नेपाली छुटयाउने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले धेरै ठाउँमा समस्या उब्जिएको छ । पहिचानकै समस्याका कारण हामीहरूले कतिवटा पाउनैपर्ने कुरा पनि पाएका छैनौं, धेरै कुरामा विभेद छँदै छ । कान्छा, चौकिदार, बहादुरको दर्जा भारतीय गोर्खाले पनि अनाहकमा पाइरहेको स्थिति छ ।
यो सबै हुनाको कारण भारतमा हाम्रो आफ्नै राज्य नभएर हो । आज भारतमा २/३ करोड बंगलादेशी नागरिक बसोबासमा छन् भनिन्छ । तर पनि बंगाल राज्यमा बस्ने बंगालीलाई कुनै समस्या छैन र किनभने उनीहरू आफ्नो राज्यमा छन् । बंगाल, त्रिपुरा, आसाममा बंगालीको पहिचान छँदैछ । यसकारण भारतीय गोर्खा राज्यका लागि आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
अब कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ त ?
यस्तै हुनुपर्छ भनेर तत्काल तोक्ने अवस्था रहन्न । तर, नयाँ व्यवस्थाको नयाँ सम्झौतामा दुई देशका भिन्न नागरिकको स्पष्ट खुल्ने पहिचान समेत राखिनुपर्छ ।
द्वैध नागरिकताको कठिनाइ र जटिलताबारे पनि बहस चलिरहन्छ नि ?
हो, नेपाल–भारत सम्बन्ध र सम्बन्धको आयाममा सजिलो पहिचानले दिलाउने द्वैध चिनारी पनि उभिएको छ । दुवै देशका लागि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र सरोकारको विषय समेत हो । अहिलेसम्म यो विषयमा वैज्ञानिक र आधारसम्मत तहको छलफल भएकै थिएन । अब प्रबुद्ध समूहमार्फत कुरा सुरु होला भन्ने म ठान्छु ।
किनभने नेपालको सार्वभौमिकता र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत जोडिएको छ यो विषय । तर, अहिले भारत सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध समूहले गर्ने कामको कार्यक्षेत्र (टीओआर) नहेरी धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले स्थिति कस्तो छ भने निकास नली साँघुरिएका बेला पेटमा अनेकखण्ड कुरा जमेपछि कहिले त्यो कानबाट, कहिले आँखाबाट धुवाँ बनेर निस्केजस्तै छ हाम्रो सम्बन्ध । कहिले नाकाबन्दी, कहिले आपूर्ति बन्दको कुरा यही प्रकारान्तरमा निस्किएको धुवाँ हो ।
यसरी आफ्नै पहिचान संकटको कुरा गर्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन ?
होइन, किन पर्ने र ? हेर्नुस्, हामी भारतीय गोर्खा पनि दार्जिलिङ–डुवर्स क्षेत्रमा आफ्नै राज्य चाहन्छौं । जातीय, सांस्कृतिक र उत्पत्ति थलोका रूपमा तथा सामरिक कारणले पनि हामी हाम्रो राज्य चाहन्छौं ।
ऐतिहासिक, राजनीतिक कारण पनि छँदै छ । दार्जिलिङ मात्रै भारतमा यस्तो जिल्ला हो जसका ४ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (नेपाल, भुटान, चीन र बंगलादेश) छन् । भारतको उत्तरपूर्वी भेगलाई जोड्ने जिल्ला पनि हाम्रो मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिलेको भ्रमण तपाईंलाई कत्तिको अर्थपूर्ण लाग्यो ?
हेर्नुस्, बितेको ४ महिनामा नेपाल–भारतबीच जेजस्तो घटना भयो, यो मैंले कहिल्यै सोचेको थिइनँ । तर, यो भइसक्यो । अब भने किन भयो भनेर गम्भीरताका साथ समीक्षा हुनैपर्छ । किनभने हामीलाई यो एउटा पाठ हो ।
अहिले गठन भएको द्विदेशीय प्रबुद्ध समूहले यस्ता समस्या र अन्योलबारे राम्रैसँग निफन्नु जरुरी छ । ओलीको भारत भ्रमण एकदमै सामयिक र निकै महत्त्वपूर्ण लागेको छ । चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा भ्रमण भएकाले यसले सम्बन्धमा सहजपन ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । विभिन्न विषयमा ७ सम्झौता भएका छन् । यी पनि अर्थपूर्ण देखेको छु ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्याख्याका अनुसार पनि मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ । दुई भिन्न राष्ट्र आ–आफ्नो सार्वभौमिकता भएका राष्ट्रको चासो र सरोकार आ–आफ्नै हुन सक्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता कम वा बढी हुँदैन, बराबर हुन्छ । कसैले सार्वभौमिकतालाई खुला सिमानामा जोडेर हेर्छन् । भारतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई जहिल्यै सजीव राख्नुपर्छ ।
नेपालले पनि भारतको सार्वभौमिकतालाई उसैगरी सजीव राख्नुपर्छ । हेर्नोस्, १९५० को आधारमा अहिले कुरा गरेर हुँदैन । धेरै कुरामा आकाश–जमिनको फरक आइसक्यो । १९५० हेरीकन अहिले चीनकै गतिविधि अर्कै भइसक्यो । त्यसबेला निजी क्षेत्र भन्ने थिएन, अहिले निजी क्षेत्र र पुँजीवादको कुरा उता बढेको छ । अबका दिनमा हामीले सय वर्षपछि नेपाल–भारत वा छिमेकमा चीनको भूमिकाबारे सोचेर नीति तय गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाबारे तपाईंको धारणा के छ ?
तपाई आफ्नै देशको पूर्वी सिमाना पशुपतिनगरको अलिक तल जानुभयो भने नेपाल–भारतको सिमाना यस्तो छ, एउटा टेकेको पैतालामा बुढी औंला अर्कै देशमा पर्ने स्थिति छ । अब यो एउटा विशेष परिस्थिति र युगमा कायम भएको सिमाना ठिकै थियो । तर, आजको युगमा के यो उपयुक्त छ ? अबको नयाँ चुनौतीमा सुरक्षा, जनसंख्या, आवतजावत, आतंक धेरै कुरा जोडिएको छ ।
अहिले बाहिरी विश्वमा ‘स्मार्ट बोर्डर’ भन्ने नामांकन सुरु भइसकेको छ । पहिले पहिले ‘बोर्डर’ भन्नासाथ एउटा रेखा हुन्थ्यो, त्यो सीमारेखा भन्नासाथ पारम्परिक सोचमा सीमासुरक्षा, सैन्य गस्ती रहन्थ्यो । अब ‘बोर्डरलेन्ड’को युग आइसक्यो– सिमानाक्षेत्र । सिमानाक्षेत्रमा व्यापार हुन्छ, वाणिज्य हुन्छ वा तीर्थाटन हुन्छ । अबको युगमा स्मार्ट बोर्डर अथवा बोर्डरलाइन के–कस्तो अवधारणामा जाने भन्ने पनि सोच्ने बेला आएको छ । जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई पनि अप्ठ्यारो नपारोस् ।
अर्को कुरा, खुला सीमा भन्दैमा अब पनि कुनै आधिकारिक पहिचान पत्र र आधारसम्मत पहिचानबिनै आवतजावत गर्न दिने कुरामा सोच्न सकिन्छ । अथवा, निश्चित ट्रान्जिट–पोइन्ट तोकेर सिमाना ‘रेगुलेट’ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्ता विज्ञानसम्मत दिशामा पनि अब सोच्नैपर्छ ।
कान्तिपुर प्रकाशित: फाल्गुन ११, २०७२
4,578,876 total views, 1 views today
Bengal Proposes to Form Separate Task Force for Gorkhas and Adivasis in Dooars and Terai PURAN GONGBA ‪RestInMusic‬
95,308 total views, 1,352 views today
Delegation of FIGA headed by Anjali Sharma Bhujel met Governor of West Bengal in Darjeeling on Friday and submittedamemorandum, highlighting the political issues of Darjeeling hills and Gorkhaland. Currently Governor is in Darjeeling. [Pic from Khabarmagazine] 95,347 total views, 1,352 views today Comments comments
95,347 total views, 1,352 views today
Sabina Rai from team Run With Roshni is the winner of Aircraft Carrier Run-21km at WNC Navy Half Marathon. 98,656 total views, 1,352 views today Comments comments
98,656 total views, 1,352 views today
The breathtakingly beautiful sunsets of Darjeeling are best enjoyed with your fingers entwined with your partner’s. 95,267 total views, 1,352 views today Comments comments
95,267 total views, 1,352 views today
98,647 total views, 1,353 views today